कस्ता महिलाहरु निकै सेक्सी हुन्छन ? - LoktantrikNews - अग्रगामी खबरको रफ्तार
कस्ता महिलाहरु निकै सेक्सी हुन्छन ?
महिलाको व्यक्तित्व जान्ने इच्छा हरेक व्यक्तिमा हुने गर्दछ । आकृति विज्ञान एउटा यस्तो अध्ययन हो जुन शरीरको अंग तथा चालढालबाट व्यक्तित्वको परिचय दिने गर्दछ । यहाँ हामीले पनि आँखा र नाकको बनावटबाट कसरी महिलाको व्यक्तित्व जान्न सकिन्छ भन्ने विषय कुरा गरिएको छ |
आँखा निकै चञ्चल, चमक तथा गहिरो पातलो र वरपर लालिमा सहितको आँखा, भाग्यशाली महिला हुनुको प्रतिक हो साथै यस्ता महिलाहरु समाजको नेतृत्व गर्ने प्रकारका हुन्छन् । छोटो, सुस्त, उदास स्लेटी रङ्ग, गोलो, केही मुडी, खाली र केही परेवाको जस्तो आँखा भएका महिलाले कुरुपता प्रदर्शन गर्दछन् । यस्ता महिला चतुर हुन्छन् साथै उनीहरु जीवनमा अघि बढ्न चाहँदैनन् ।
रातो आँखा भएका महिलाहरु धोकेवाज र बेइमान हुन्छन् यदि आँखा निकै लामो तथा हल्का लालिमायुक्त छ भने यस्ता महिला आवेशपूर्ण हुन्छन् भन्ने मान्न सकिन्छ । यस्ता आँखा भएका महिला समाजमा निकै लोकप्रीय हुन्छन् । गोलो वा कालो आँखा भएका महिलाहरु निकै सेक्सी हुन्छन् । सधैं निंदमा झै रहेने मदमस्त आँखा भएका महिला विपरीत लिङ्गीप्रति चाँचै आकर्षित हुन्छन् र चाँडै चरित्र त्याग गर्दछन् । नरम किनारा वा कालो पलवाला आँखा भएका महिला भाग्यशाली हुन्छन् । यदि आँखाको किनारमा हल्का रौं छ, आँखामा पँहेलोपन छ भने यस्ता महिला बढी विरामी हुन्छन् |
यदि एउटी महिलाको नाक सुगाको जस्तो झुकेको छ भने उनी राम्रो स्वभाव, सम्पत्ति मन पराउने, चतुर तथा परिवारको हित चिताउने हुन्छन् । सामान्य लम्बाई तथा सिधा नाक भएका महिलाहरु सुन्दर, बुद्धिमान, मेहनती तथा मिजासिला प्रकारका हुन्छन् । छोटो नाक भएका महिलाहरु चलाख, चतर, शरारती वा कामातुर हुन्छन् यदि कुनै महिलाको नाक बीचबाट फैलिएको छ वा अगाडिको भाग अधिक उच्च छ वा अधिक मोटो छ भने यस्ता महिला प्रेम, सहानुभूतिबाट बञ्चित हुन्छन् । यस्ता महिला दुष्ट प्रवृत्ति, चरित्रहीन वा निर्णय लिनमा हतार गर्ने प्रकारका हुन्छन् । यदि नाक बढी नै चौडा र मोटो छ भने यस्ता महिलाहरु आलसी, बलियो नेतृत्व, घमण्डी हुन्छन् । यदि नाकको टीप छोटो छ भने यस्ता महिला दासले झै जीवन बिताउने प्रकारका हुन्छन् । नाकको टिप लामो हुनु उनीहरुको कठोर स्वभावको प्रतिक हो । यदि टिप फैलिएकोछ भने श्रीमानको दीर्घायु हुनुको प्रतिक हो। नाकमा रौं भएका महिलाको स्थिति चतुर र अशुभव हुने गर्दछ।
नोटः यो आँकलन केवल स्वभाविक रुपमा भगवान प्रदत्त शारीरिक अंग वा चालढालमा आधारित छ